Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Gylfi Sigurdsson Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; “Nwoke Ice”.
Gylfi Sigurdsson Childhoodmụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya dị egwu mana mana ole na ole na-ele Gylfi Sigurdsson Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Gylfi Sigurdsson Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Gylfi Sigurdsson mụrụ na 8th ụbọchị Septemba 1989 na Reykjavik, Iceland. Amuru ya nna ya, Sigurdur Adalsteinsson, onye Iceland Fisherman.
Sigurdsson na-agba bọọlụ ozugbo ọ nwere ike ịga ije. Nna ya na nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Olafur, mere ya ka ọ bụrụ ndị na-agba ọsọ ya.
Ọbụna nna ha gbazitere ụlọ nkwakọba ihe maka oge oyi ka a kwụsị ọchịchị ọzụzụ nwa ya nwoke.
Nnukwu nwanne ya nwoke, Olafur gụziri onwe ya ma gakwa ụlọ akwụkwọ nkuzi tupu ọ bụrụ onye nkuzi Gylfi. "Anọ m na-achọ ịchọta teepu VHS ọ bụla m nwere ike ịchọta ma gbalịa mụta otu esi azụ nwa na-eto eto,"
Nna ya na nwanne ya nwoke mere okenye mgbe ọ dị afọ 13 ma kpọga ya na Breiðablik si FH Hafnarfjörður (Iceland aha) dịka ọnọdụ nke ịgba bọlbụ dị mma n'ebe ahụ. E weere ya n'ebe ahụ ka o too.
Fífan, ụlọ ime ụlọ nke nwere ogo zuru ezu, ka ewugo n'oge na-adịbeghị anya na nke ahụ bụ isi ihe dị na Sigurðsson bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado maka Breiðablik mgbe ọ dị naanị 13.
Sigurðsson na-abụkarị onye ọkpụkpọ nwere ike n'oge ọ bụ nwata na ike ịgafe na ikike ịgbapụ pụtara n'isi ụtụtụ na-ekwu Magnús Jónsson, onye nchịkwa Sigurðsson n'etiti afọ 11 na 14.
“O nwere ikike dị elu nke teknụzụ mgbe m zutere ya mgbe ọ dị afọ 14, ọkachasị mgbe ọ bịara ịkụ bọl. Ọtụtụ n'ime ụmụ nwoke ndị ọzọ bụcha ezigbo mana ụzọ ọ gafere ma gbaa ya dị ọtụtụ kilomita n'ihu, ” ka Jonsson na-ekwu.
“Sigurðsson dị ka ọtụtụ ụmụaka ndị ọzọ n'ọgbọ ya ike nke Icelandic siri ike, na-achọ imeziwanye ihe, na-azụ ọzụzụ ruo ọtụtụ awa, na ọchịchọ ya imeri bụ nnukwu, n'agbanyeghị ọnọdụ ” na-agbakwụnye Jónsson.
“Ọ na-azụkarị ọzụzụ nke ọma ma chọọ imeri asọmpi ọ bụla na ọzụzụ, ma nke a bụ ntaramahụhụ ntaramahụhụ ma ọ bụ golf golf.
Gbanweep nke na, họ na-emekarị ihe ndị ọzọ, ọ na-ekere òkè mgbe nile n'ụlọ akwụkwọ ịgba chaa chaa ma nọrọ n'azụ mgbe ọ bụla ọzụzụ iji mee ihe ọzọ, " ka Jónsson na-ekwu.
Gylfi Sigurdsson onye na - akọ akụkọ banyere ndu - na - ebili ka amaara ya:
Gylfi malitere ọrụ ya na Readinggụ na Championship, na 2010 e rere ya Hoffenheim nke bụ nnukwu ahịa nke Reading.
A hoputara ya Onye egwu nke Oge maka oge abụọ sochiri - maka Ọgụgụ na 2009–10 na Hoffenheim na 2010–11.
Mgbe otu oge laghachiri na football Bekee na Swansea City ọ sonyeere Tottenham Hotspur maka £ 8.8, na 2014 laghachiri Swansea dịka akụkụ nke mgbanwe maka Ben Davies.
Ọ bụ mgbe ọ gbasịrị ọsọ ọsọ na Euro 2016 na Gylfi nwetara nkwado zuru ụwa ọnụ, si otú a bụrụ ụdị Icelandic nke Tiger Woods.
Mgbe Euro 2016 gasịrị, Gylfi, nwa onye ọkụ azụ, ghọrọ onye ama ama ama amaala mba ahụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Gylfi Sigurdsson Alexandra Storyhụnanya Akụkọ:
Ọ bụ nwanyị na-ejide mkpịsị ugodi nke obi Gylfi. Alexandra meriri na Miss World Sporty nke Miss World zoo na South Africa na 2008. Ọ meriri Miss Iceland n'otu afọ ahụ.
Mgbe Alex jere ije n'okporo ụzọ dị na South Africa afọ 9 gara aga site na ụbọchị a, Alexandra bụ nwa akwụkwọ na-amụ banyere akparamàgwà mmadụ, bụ onye depụtara ịhụnanya ya dịka ịnọ n'èzí na njem, yana ikpughe nri ya kachasị amasị bụ steak steak na salad chicken.
Taa ka m na-ede Gylfi Sigurdsson's Bio, ọ bụ nwanyị na-azụ ahịa na onye na-ede blọgụ ejiji na-ede blọgụ ya gburugburu ụwa.
Dị ka n'oge ederede, ma ndị hụrụ ya n'anya na-ebi ndụ dị jụụ na Merseyside na nkịta ha, na-ebibu na Swansea na London.
Gylfi Sigurdsson Ndụ Ezinụlọ:
Dị ka e kwuru na mbụ, nna Gylfi Sigurdsson bụ onye ọkụ azụ nke a họọrọ n'etiti ndị kasị mma na mba ya. N'okpuru ebe a bụ Sigurdur Adalsteinsson na nwa ya nwoke ọ hụrụ n'anya, Gylfi.
Sigurðsson ejirila nnukwu nkwado sitere na ezinụlọ ya gọzie ya, nke doro anya nyeere ya aka n'oge ọrụ ya niile.
Ọ hapụrụ Iceland iji sonyere Readinggụ mgbe ọ ka bụ nanị 15, mana ndị ezinụlọ ya kwadoro ya n'ụzọ ego. Taa, itinye ego maka ịgba bọọlụ akwụla ụgwọ maka ezinụlọ ya nọ na nwata.
“Ahụrụ m ya nke ọma dịka ihe dị mkpa na ndị nọ ya nso tinyere nnukwu mgbalị iji nyere ya aka.
Nwanne ya nwoke nkekariri nke oma n’iso ya aru oru on foihe metụtara otball. Echere m na nne ya na nwanne ya nwanyị enyerela ya aka n'akụkụ uche nke ihe.
Nke ahụ bụ nnukwu ihe kpatara etu o si dị ala, ” ka Jónsson na-ekwu.
Mgbe Olafur, nwanne ya nwoke nke okenye hụrụ na nwanne ya nwoke dị mma ịla, ọ malitere ọrụ na golf.
Ọ bụ onye golfer ruru eru ọ bụ ezie na ịchọta iru eru na European Tour ọ dịghị mgbe ihe onwunwe maka ya.
Gylfi Sigurdsson Ndụ Nke Onwe:
Gylfi Sigurdsson nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike: Gylfi bụ onye na-eguzosi ike n'ihe, onye nyocha, ụdị, na-arụsi ọrụ ike na ọdịdị.
Ajọ: Mgbe ụfọdụ, Gylfi nwere ike igosi ihere, nchegbu maka onwe ya ma ọ bụ ndị ọzọ ọ hụrụ n'anya. Ọ bụ ụdị ga-ahọrọ ịkụ bọl ụbọchị niile na-enweghị oge maka onwe ya belụsọ site na aka Alexandra.
Ihe ọ na-amasị: Gylfi hụrụ ụmụ anụmanụ, nri dị mma, akwụkwọ, ọdịdị, na ịdị ọcha.
Ihe ọ na-achọghị: Gylfi adịghị amasị Rudeness ụdị ọ bụla.
Na nchịkọta, Gylfi bụ onye hụrụ n'anya ịṅa ntị na nkọwa kacha nta mgbe ọ na-enweta ntụziaka ọzụzụ ma ọ bụ nkwurịta okwu.
Gylfi Sigurdsson Akụkọ nke na-adịghị ekezi Eziokwu - Backlaghachi:
Nwanne nwoke nke mba Icelandic kesara ihe nkedo site na 2001 na-egosi nwata ahụ dị afọ iri na abụọ n'èzí Goodison.
Sigurdsson na-esote ihe oyiyi Dixie Dean a ma ama nke na-eyi uwe elu Blue-otu na otu nke na-ele anya karịa ya. Okwukwu ya gụrụ; "A zụrụ ya otu izu na Everton, bụrụ nwa nwoke bọọlụ na Goodison ma mesịa soro Everton gaa Germany maka asọmpi."
A na - ekwu na Floki, onye agwa onye omeegwu Sweden bụ Gustaf Skarsgard n’egwuregwu telivishọn Vikings ama ama, bụ onye guzobere mba Gylfi Sigurdsson Iceland
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye égbè:
Gwa eziokwu! Tupu ya abanye na Ọgụgụ, Sigurdsson nọ na ikpe na Arsenal - ndị na-agba asọmpi ya ugbu a.
Knowsnye maara, Sigurdsson nwere ike ịbụ na-egwuri egwu maka Red ọkara nke North London ọ bụrụ na ikpe ahụ arụ ọrụ. N'agbanyeghị na ọ na-efu, ọ ka nwere ebe dị nro maka North London Club.
Egwuru egwu megide Swansea:
Nna ya maara ya nke ọma. N'abalị bọtara tupu ya na ndị ọrụ ya ochie, bụ Gylfi Sigurdsson kpebiri ịbịa n'ụlọ. Ndụmọdụ ahụ ọ natara dị oké mkpa.
'Mụ na papa m, Sigurd, nwere mkparịta ụka,' onye na-eto eto Everton kwuru otu oge. 'Ọ sịrị, "Ihe ọ bụla ị na - eme, emela ememe".
Anọla m afọ atọ na ọkara na Swansea, gbara egwuregwu mbụ m na Premier League n'ebe ahụ. Enwere m nkwanye ùgwù dị ukwuu. Mgbe ọ sịrị anaghị eme mmemme m kwuru, "Ama m". Agaghị m eme ya. '
Sigurdsson mechatara ihe mgbaru ọsọ magburu onwe ya site na ịkụ aka, aka ụkwụ aka nri nke e doziri maka ihe mgbaru ọsọ nke ọnwa ahụ. Mgbe o kwusiri ike, o nwetara ikike nke aka ya iji mee ka mmetụta ya niile pụọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Gylfi Sigurdsson nke nwata na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
a na-emekarị na ị nwere ike ịchọta ihe ọmụma
Bọchị agbanweela: Machị 19, 2021